Salamo faha-151 - Wikipedia
Ny Salamo faha-151 dia salamo tsy hita ao Bokin' ny Salamo araka ny ahafantarana azy ao amin' ny Baiboly hebreo sy ny Baibolin' ny ankamaroan' ny fivavahana kristiana (katôlika, prôtestanta sns.) izay ataon' ny mpanoratra azy ho sora-tanan' i Davida tenany. Tsy mitondra laharana izy tamin' ny voalohany. Ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny teny grika atao hoe Septoajinta (na Septanta) no ahitana azy.
1 Ny zavatra voalaza ao amin' ny Salamo faha-151
2 Fandraisana ny Salamo faha-151
2.1 Ireo dikan-teny tranainy
2.2 Soratra kanônika
2.3 Soratra apôkrifa
Ny zavatra voalaza ao amin' ny Salamo faha-151Hanova
Toy izao no fanombohan' ny lahatsorany:
"Izao ny Salamo nosoratan' ny tanan' i Davida sy ivelan' ny filaharana. Raha nanao ny adin' ny fanalolahy tamin' i Gôliata izy".
Ao amin' ny dikan-teny hebreo anefa dia izao no teny fiantombohany:
"Aleloia! Ho an' i Davida zanak' i Jese".
Naka ny tantara ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka ny mpanoratra (1Mpan. 16.1-13 sy 1Mpan. 17.40-51) izay miresaka ny amin' ny nisafidianana an' i Davida sy ny fanosorana azy ary ny ady nifanaovany tamin' i Gôliata.
Fandraisana ny Salamo faha-151Hanova
Ireo dikan-teny tranainyHanova
Hita ao amin' ny Baiboly jiosy amin' ny fiteny grika atao hoe Septanta (na Septoaginta) sy ao amin' ireo Baiboly amin' ny fiteny latina atao hoe Latina Tranainy (latina: Vetus Latina) ary ao amin' ny Volgata (latina Vulgata) ny Salamo faha-151. Hita ao amin' ny Peshitta (izay ahitana koa ny Salamo faha-152 hatramin' ny faha-155) sy ao amin' ny Baibolin' ireo Fiangonan' ny kônsily telo (Fiangonana ôrtôdôksa tatsinanana) koa izy.
Soratra kanônika anefa ny Salamo faha-151 ho an' ny Fiangonana apôstôlika armeniana (isan' ny Ôrtôdôksa tatsinanana), izay mampiasa azy amin' ny andron' ny Pentekôsta, sy ny Fiangonana ôrtôdôksa teoahedo izay mamaky azy amin' ny alin' ny Zoma masina. Ny Fiagonana ôrtôdôksa kôpta ary ny Fiangonana katôlika armeniana koa dia manao azy ho kanônika.
Araka an' i Henri-François de Vence dia nolavin' ireo Rain' ny Fiangonana (na Aban' ny Eglizy) ny Salamo faha-151 satria tsy nihevitra azy io ho tsara tahirizina i Ezra (na Esdrasa) tamin' ny nanangonany ny boky samihafa ao amin' ny Soratra Masina. Laviny koa ny maha voasoratra amin' ny fiteny hebreo na arameana tamin' ny voalohany io salamo io fa mety tamin' ny fiteny grika.
Salamo apôkrifa ny Salamo faha-151 ho an' ny Fiangonana katôlika sy ireo fiangonana rehetra nipoitra avy aminy, na mivantana na tsia (Prôtestanta, Evanjelika sns.), ary ho an' ny ankamaroana' ny Jiosy.
Salamo apôkrifa: Salamo faha-151 - Salamo faha-152 hatramin' ny faha-155.
↑ Ny Peshita (Peshitta) dia ny Baiboly kristina amin'ny dikan-teny siriaka tranainy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Salamo_faha-151&oldid=1042180"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 17:08
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 17:08 ity pejy ity.